We Will Rise From The Dead - New Zimbabwe Steel Boss - The Zimbabwean
"When I left India for Zimbabwe, all my friends thought I was crazy," says a smiling and confident Firdhose Coovadia.
"But now that I am here and am on top of the situation. I must say, however, that my experience has been quite pleasant. For too long Africa has been viewed as a graveyard for under-development."
"We need to train Zimbabweans to take over when I leave," he quickly points out."Africa needs help in building its workforce and not to have to listen to foreigners all the time because they just implement what they think is the solution which is sometimes not the case as is at New Zimbabwe Steel."
Most recently, however, he has led Essar Africa Holdings Limited team which has completed the Zisco "Transaction" and partial privatisation by the Government of Zimbabwe.
"Zimbabwe is resource-rich, but infrastructure poor," he said in an exclusive interview. "There were 3 800 workers who were unpaid at Zisco. They were owed a grand total of US$50 million but they were resilient a strong testimony of the people of Zimbabwe. I salute them all today.
"We need a skills transfer and not always reporting to a foreign master. Zimbabwe, however, has no capital and investors always must bring in their own cash which make projects face a difficult time here and thus chases away investors."